Ngwaahịa 40 na-arụ ọrụ nke ọma, ha nwere ọtụtụ nyocha 5-kpakpando | Ebe nrụọrụ
Ọtụtụ mgbe, ị na-azụta ngwaahịa n'ịntanetị ma ị naghị atụ anya ọtụtụ ihe na ya, ewezuga ịrụzu ọrụ ezubere ya. Mana otu mgbe ọ dị obere, ihe na-egosi na ọnụ ụzọ gị nke gafere ma gafere, dịka ọ dị na ngwaahịa ndị 40 tụlere nke ukwuu na -echekarị echiche.
Ohere nwere, ị hụla ole na ole n'ime ngwaahịa ndị a gosipụtara na ndepụta ndị ọzọ kachasị mma n'ịntanetị, nke ahụ bụ n'ihi na ha kwesịrị ịnwe ọnọdụ ha na ha. Okwu dị na: Ekwentị Bluetooth a na-ebugharị ebugharị nke na-achịkọta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 25,000 kpakpando Amazon ise. Ọbụghị naanị na ọ na-enye ụda egwu zuru oke, ọ na-enyekwa awa iri na abụọ nke egwuregwu. Ma ebe mmiri na-egbochi mmiri, ọ bụ nnukwu nhọrọ ma ọ bụrụ na ị na-ehi ụra ụbọchị n'ọdọ mmiri ahụ ma ọ bụ kpọgide n'akụkụ ọdọ mmiri. 'Ll ga-ahụ ụfọdụ ihe ọhụụ na ebe a, ọ bụ ezie na, dị ka mmanụ magnesium ọgwụ nke na-enyere aka izulata akwara mgbe arụchara ọrụ (ma ọ bụ awa ole na ole nọrọ na oku ọrụ) ma ọ bụ set nke smart plọg na-enye gị ohere ijikwa ngwa si ngwa. n’ekwentị gị.
Y’oburu na enwechaghi obi uto nke onye n’aru oru oma n’iru nwa oge, inwere na ogwu. Ekwenyere ihe ndị a niile enyochaa ma dị na mbufe ụbọchị abụọ na Amazon.
Anyị na-akwado ngwaahịa ndị anyị hụrụ n'anya na anyị chere na ị ga-achọ. Anyị nwere ike ịnweta otu azụmaahịa sitere na ngwaahịa ndị a zụtara n'isiokwu a, ndị otu azụmahịa ha dere.
Away na-apụ ụbọchị ole na ole? Igwefoto nchekwa ụlọ a na-eji mmekọrịta, ị nwere ike ịnweta ndepụta live Stream ozugbo ekwentị gị. Ọbụna nke ka mma, ịnwere ike iji ngwa ahụ iji mee igwefoto ahụ wee hụ ụlọ ahụ dum. Edere vidiyo iri na abụọ n’ime oge ọ bụla achọpụtara ije, wee chekwaa ya n’igwe ojii, ka ị nwee ike nyochaa ya ma emesịa.
Bee eriri wee nweta TV gị site na iji Amazon Fire Stick, yabụ ị nwere ike were ọtụtụ puku ihe nkiri na TV nke TV site na ịpị ime ime ya. Ọ dakọtara yana ọrụ nkwanye ugwu niile na ịnweta ihe ngosi na ihe nkiri na Amazon Prime bụ n'efu. Na mgbakwunye, na arụmọrụ Alexa, ịnwere ike iji iwu olu ịchọta ihe ị na-achọ.
Ihe dị mma maka ụdị nnụnụ, ịchụ nta, na ịga mkpagharị, binoculas ndị a na-enye nrịgo 12x dị ike ma nwee nnukwu ọrụ ọkụ, yabụ ị nwere ike na-eji ha mgbe anyanwụ malitere ịda. Iko anya nke na-agbanwe agbanwe na-anabata onye ọ bụla nke na-etinye iko, na binoculas na-agbachi obere, ị nwere ike ị na-ebutu ya na ngwugwu gị.
Obere ihe na-ebute ọdịiche dị iche iche, dị ka ụdọ eriri ndị a na-echebe eriri gị ka ọ ga-adaba ebe ha na-adabakarị. Igwe na-agbanwe agbanwe na-adaba na mfe ma dabara adaba maka ọtụtụ ụdọ, gụnyere USB, micro-USB, na eriri ọkụ. Nhazi nke ọ bụla na-abịa usoro nkwonkwo asatọ.
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe akpọrọ nkụ, nkụ, ma ọ bụ ọba ụkwụ gbawara agbawa, ude mmiri a dị arọ bụ ihe ịchọrọ iji weghachite gị n'ụdị. Ejiri allantoin mepụta ya nke ukwuu - ahịhịa pụrụ iche nke na-abanye n'ime anụ ahụ na-adịghị ike iji nyefee mmiri dị omimi. Tinye nke a tupu akwa ma ụkwụ gị ga-amalite ịgbanwe n’ime ụbọchị ole na ole.
Nnukwu ego na ahụike gị, probiotic a gụnyere nje iri na abụọ na usoro ịtọhapụ oge na-eji nwayọ weghachi nguzozi na mgbatị gị, na-arụ ọrụ iji kwado usoro ahụike na nri nri, ebe ọ na -ewelite ahụike uche na nke mmetụta uche (ee, gut gị bụ nke gị nke abụọ “ụbụrụ”). Ọ bụ vegan, kosher, nke na-abụghị GMO, na enweghị allergens nkịtị dị ka ọka, gluten, na akụ.
Ekele maka nhicha nhicha mmiri a, ọ nweghị ọzọ guzoro n'akụkụ ka ị na-eche ego ole ị ga - esi tinye mmiri na - enweghị nsogbu. Ọ na-abịa n'ụzọ dị mma-ahọ ụzọ tụọ ya ụzọ abụọ ma sie ike ruo na na site na ntutu, ncha, akwụkwọ, na griiz clogs. Jiri ya saa ma ọ bụ ime ụlọ ịsa ahụ na ebe a na-esi nri.
Mmetụta anụ ahụ magnesium bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma iji wee nweta uru nke ọrụ ebube a mara amara na-eme ka uru ahụ dị nro, na-ebelata ihe mgbu, gbochie migraine, belata obi erughị ala, ma na-akwalite ụra kwesịrị ekwesị. A na-enweta mmanụ magnesium a n'Oké Osimiri Nwụrụ Anwụ, ndị na-enyocha Amazon na-a swearụ iyi site na nsonaazụ ya, na-ede otu na ọ "na-arụ ọrụ ebube maka akwara na akwara mgbu."
Onye kachasị amasị A-listers bụ ndị na-eje ije kapeeti na-acha uhie uhie mgbe niile, Mario Badescu ihicha mmiri ahụ bụ ụzọ nzuzu iji belata mmerụ ahụ ozugbo ha bilitere. Ejiri usoro nke ọkacha mmasị na zinc na salicylic acid bụ nke a na-eji maka ngwa ọrụ ahụ, ya na calamine iji mee ka ọcha na mbufụt belata. Tinye tupu akwa ụra, teta n'ụdị ahụ dị nkọ.
Debe ihe foro gị ka ọ dị ọhụrụ dịka abalị ị buru ụzọ were sie nri ndị a na-echekwa nri, nke gbatịkwara n’elu ọkwa na igbe. Ejiri silicone na-enweghị BPA, ha na-ekpo ọkụ ma na-asa efere, nchekwa nke ọ bụla na-abịa na ntinye ụzọ asaa na nha dịgasị iche iche.
Ọ bụrụ na ịnwalela blanket dị arọ na mbụ, ị ga-achọ ịga n'ihu wee pịa “Tinye na ụgbọ ibu”. Ibu ahụ na - enyere aka belata dopamine na serotonin, nke nwere ike inye aka belata nchekasị, kwalite ụra, ma mee ka ị dapụ ngwa ngwa. Ọ dị na ụdị dị iche iche - họrọ nke dị ihe dị ka 12% nke ahụ gị.
Mpempe ụkwụ a nke na - emegharị ụkwụ nwere akụkụ pumice dị n'otu akụkụ iji wee gbasaa ma mee ka akpụkpọ anụ na - adịghị mma, ma n'akụkụ nke ọzọ bụ ncha emomlient nke nwere sọma miri, shea butter, na vitamin E. Jiri nke a mgbe niile maka ụkwụ na-ele anya ma dị nwayọ - enweghị ike.
Site na onye na - echekwa mmiri iyi a, ị ga - ejide n'aka na ntutu isi ọ bụla agaghị agbadata ma ọ na - akpata mkpọpu. Ezubere iji dozie ọwa mmiri ọ bụla, ọ na - enweta ajị ajị ma kechie ya gburugburu cylinder etiti, ebe ihe a na - eme ebe niile na - eme ka mmiri na - agafe, yabụ ị gaghị akwụ ọtọ na inch nke ya mgbe ị na - ete ncha.
Onye ofufe kachasị amasị na puku nyocha ise nke kpakpando ise nke Amazon, ekwuru okwu Bluetooth a na-ebugharị na-ejikọ na ikuku na ngwaọrụ ọ bụla ma na-enye ụda stereo ụda dị egwu ruo awa iri na abụọ n'otu ụgwọ. Ọ bụ mgbochi mmiri IPX7, yabụ ị nwere ike ịnụ ụtọ egwu gị na gburugburu ọdọ mmiri ma ọ bụ n'akụkụ osimiri, mkpọtụ mkpọlite ​​wuruwuru na mic pụtara na ọ dị mma maka oku. Họrọ site na agba itoolu.
Ọ dị mma maka ịme efere na ihicha akwa na-akwa akwa ndị a na-ejigharị eme site na cellulose na owu na-adọrọ adọrọ, otu mkpọ isii nwere ike dochie ihe ruru 90 akwụkwọ mpịakọta akwụkwọ. Zuru oke ma ọ bụrụ na working na-arụ ọrụ ụzọ gị n’ebe ezi-na-ụlọ ihe efu dị, ha bụ igwe aka ha ga-adị ọrịrị ma ha agaghị achọ iru ala dị mma ma ọ bụ hapụ ihe dị ọcha.
Ọ bụrụ na ịnagide isi ọwụwa ma ọ bụ isi ọwụwa, ị maara etu ha nwere ike isi nwee nsogbu, mana ngwa acupressure a nwere ike inye ụfọdụ ahụike. Site n'iji mkpachasị anya tinye mkpịsị ụzọ ahụ na L14 acupressure isi (n'etiti isi mkpịsị aka gị na isi ukwu gị), ọ ga-anapụta mkpakọ ọgwụgwọ iji belata ihe mgbu ka ọ na-emekwa ka ike na-ebelata esemokwu.
Moldrọ, mildew, na isi musty bụ nsogbu ndị a na-enwekarị n'ụlọ dị afọ niile, mana mmiri na-amị mmiri bụ ihe dị mfe idozi. Naanị gbajie elu ya, ọ ga - adọta ma meekwa ka mmiri ghara ịba ụba, na - ahapụ ime ụlọ ọ bụla ma na - ehicha. Otu onye na-enyocha ihe banyere Amazon dere, sị, “Mbelata nke ịcha mmiri n'ọnụ ụlọ m, ọ na-anọ ogologo oge! Kacha mma karịa ihe ngwọta niile anyị nwara. Wepụ isi na-esi isi na-egbu anyị kemgbe ọtụtụ ọnwa. ”
Ọ bụ ihe na-achọ ọnwụnwa ịtụfu ihe niile ị na - eche na njedebe n'ime ogwe ụgbọala gị, naanị ịmepe ya mgbe ị na - eburu gị ibu wee bịa buo ibu. Onye nhazi a ga - atụba ọgbaghara a n'usoro, n'ihi nnukwu ngalaba abụọ maka nnukwu ihe na obere akpa ndị dị n'akụkụ maka ngwa na ngwa. Na mgbakwunye, ihe ahụ dum na-ekekọta ọnụ mgbe oge ruru itinye ụfọdụ akwa.
Jiri nkedo a na-eji ihe na -eme nchacha mee ka ụlọ gị dị ọcha. Mpempe ahụ dị mkpụmkpụ na-akwụsi ike iji nye gị ezigbo ihe nhicha, ebe akụkụ nwere akụkụ ga-enyere gị aka ịbanye na nkuku ma scraper na-arụ ọrụ nri. Ọ bụ ụzọ dị mma iji hichaa na-enweghị ncha, yabụ pan gị nwere ike idowe ụdị oge ahụ nke ọma.
Siri ike ijide ihe ruru paụnd iri na ise n’achụghị akụ, nkenke nchekwa a dị mma maka igodo osisi, foto, akwa na ihe ndị ọzọ. Ha ga-efe n’elu n’elu ebe ọ bụla dị mma, gụnyere taịl na enyo, ma ebe ọ bụ na ha na-ahụ ụzọ, ha anaghị ahụ anya. Na-akwado ya na nrapado, ha na-arụnye ngwa ngwa ma dị mfe iwepu na-enweghị imebi ihe ọ bụla.
Onye ọzọ na-ahụ n'anya (ahem) onye ọkacha mmasị, kompeni a mana ike siri ike enwetala nyocha 17,000 nke kpakpando Amazon. Onye na-agba ọsọ ọsọ atọ na-ekesa ọtụtụ ikuku iji nye ahụ efe n'ime ụlọ ọ bụla na-ekpo ọkụ, isi na-efekwa ogo 90, yabụ ị nwere ike ịchọrọ ịgbanye ikuku ebe ọ bụla ịchọrọ. Mana n'adịghị ka ndị egwu ndị ọzọ dị ike, nke a nwere obere akara ukwu zuru ezu iji nọrọ na tebụl ma ọ bụ tebụl kọfị gị.
Ọ bụrụ n’ịnụrụ ụda egwu, ịtụgharị uche, ma ọ bụ pọdkastị ka ị na-ehi ụra, ikpuchi ụra Bluetooth a bụ ihe ịchọrọ. Ihe nkpuchi ugha banyere ebe nchekwa ihe na emeghari na igwe okwu Bluetooth, yabụ inwere ike ige egwu egwu gi ka ikwusi ihie n'otu oge. Na mgbakwunye, ihu nke nkpuchi ahụ agbakwunyere olu na njikwa egwu / kwụsịtụ maka ọrụ dị mfe.
N'ihi akwa a na-asa mpe mpe, ị nwere ike ịnyefee ọrụ n'ụkwụ mgbe ị na-ero ụra. Matdọ ahụ nwere ọtụtụ narị ọnya mmiri silicone na-agbanwe n’elu mmiri, yana iko mmiri na-enweghị mkpọda na ala iji mee ka ọ dịrị ọcha n’elu ala ịsa ahụ.
Collagen bu ihe nkpuchi ulo di nkpa nke otutu aru nke ahu gụnyere ntutu, mbọ, akpukpo ahu na nkwonkwo ya, na ngwungidi a collagen bu uzo di nfe ma dikwa nma iji nweta ya. Site na gram iri abụọ n’ime kọmpụta, ọ nweghị ekpomeekpo na-enweghị nri, ọ na-agbazekwa n’ọkụ na-ekpo ọkụ ma ọ bụ nke mmiri oyi, dị ka kọfị, mmiri, smoothies, na ihe ọ proteinụ proteinụ protein.
Anyị na-adabere na igwe anyị na-asa akwa iji mee ka uwe anyị dị ọcha, mana - olee otu igwe ịsa ahụ si adị onwe ha? (Igwe eji egwu abia.) Jiri otu n’ime igwe eji asa akwa mechie otu ugboro n’otu ọnwa iji hichaa nsị na egbe ma hụ na aka gị dị ọcha dị ọcha n’ezie.
Tingnọdụ ala n'azụ ụlọ apụtaghị na ị ga-anọ n'ehihie swatting ahụhụ ọ bụla - kpọgidere ọnyà ndị a iji dọta ụmụ ahụhụ ọ bụla na-akpasu iwe, ka ị nwee ike ịnụ ụtọ nnukwu ọpụpụ. Gosipụta na ha ga-enweta ihe ruru puku iri puku iri abụọ, naanị ihe ị ga - eme bụ ịgbakwunye mmiri n'olulu ahụ iji jide ihe ijiji ndị ahụ.
Ending na -emekwu oge na mpụga nwere ike ịpụta anwụnta na ndanda na-emebi egwuregwu gị, mana a na -achịkwa ebe a na-achịkwa ahụhụ iji zere ụmụ ahụhụ ruo izu anọ, ọbụlagodi mgbe mmiri zosịrị. Naanị tinye ihe na mpaghara ọrịre ọ bụla iji kesaa ya n'ofe ụlọ gị, ọ ga-egbochi anwụnta, ndanda na akpịrị.
Ọ bụrụ na ị dị mkpụmkpụ na ọdụ ụgbọ mmiri USB, ịnwere ike iji eriri USB iji nye gị ohere nkwụnye ọzọ. Dakọtara na sistemụ arụmọrụ Windows na Mac, ọ nwere ọdụ ụgbọ mmiri anọ nke enwere ike ịgbanye ma gbanyụọ n'otu n'otu iji rụọ ọrụ kachasị nke ọma, ma nke dị gịrịgịrị, ga-arụ ọrụ agaghị ewepụtacha ohere na tebụl gị.
Ejiri silicone 100% mee ya, ndị na-asa ihe a na-ehicha ngwa ngwa karịa splulose cellulose, nke pụtara na ha agaghị enwe nje ma ọ bụ isi. Ha dị oke mma na iwepu ọbụna emefu achịcha kacha sie ike, ha ga-ehichakwa ngwa nri gị niile n'enweghị nsogbu. Ngwakọta nke ọ bụla na-abịa na mkpocha atọ.
Tụfuo bọọlụ ndị a na-eji ajị anụ mee ihe na-esote gị, ha ga - enyere aka ikesa ikuku ka akwa ahụ wee mee ngwa ngwa (nke ga-eme, ichekwa ike ma belata ụgwọ ikike gị). Ha na-arụkwa ọrụ iji mee ka uwe dị nro na igbochi wrinkles, nke pụtara na ị gaghị etinye ya na mpempe akwụkwọ akọrọ n'oge ọzọ ị gara n'ụlọ ahịa.
Enwere ike idobere akwa a na-asacha ihe ịsa ahụ n’elu ebe ị na-asa ahụ, ka mmiri niile na-agbadata ozugbo ọpụpụ ahụ, mana ọ bụkwa ụzọ kachasị mma iji kpochaa mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri mgbe ị na-enweghị colander na-enweghị aka. Ma imachara ya, ọ na-adakọba nke ọma maka nchekwa, yabụ ị nwere ike ịbupu ya n'okpuru ebe a na-asa ahụ.
Ọ bụrụ na ọla ọcha ma ọ bụ mgbaaka na-achọ obere ihe maka ịka ahụ, ịnwere ike ịgbanyeghachi ha site n'enyemaka nke nhicha ọla a. Ejiri nkata ejiri ya rụọ ya, yabụ ị nwere ike ịhapụ iberibe osisi gị ndị ọzọ tarned nke ọma n’otu ntabi anya, mana - maka ọla na ọla ndị ọzọ siri ike - ị ga - achọ ịbacha ma jiri nwayọ hichaa ya na ahịhịa.
Ìgwè mmadụ kachasị amasị na Amazon, akwa a acupressure bụ “akwa nke mbọ” ị ga-achọ ịdina ala. Ejiri ya otutu puku acu, ma mgbe ị na-edina na ha, ha ga-arụ ọrụ iji kwalite mgbasa, ibelata nchekasị, ịkwado usoro ihi ụra nke ọma, na ịkwụsị mgbu. Otu onye na-enyocha ihe dere, "Enwetara m nke a n'ihi na enwere m ọnya na mgbu ike na azụ elu na enweghị m ike ị nweta ego ịhịa aka mgbe niile. [...]. Mgbe nkeji ole na ole gasịrị, ọ malitere ịgba ọkụ, mana n'ụzọ dị mma. Achọpụtara m onwe m na-emechi anya m ma zuru ike. Mgbe m biliri, m nwere ike na-eche ihe dị iche! ”
Ndị nne na nna na-ahụ n'anya ga-ahụrịrị ohere a dị oke mma dị oke mma nke nwere ihe ọkaibe rọba na-ewepu nwamba na nkịta na-enweghị nsogbu. Ọ dịkwa mma maka iji na kapeeti, ihe ndị siri ike na steepụ, eriri ụdọ ike 16 ga-enye gị ọtụtụ ogologo ịgagharị.
E-e, enwere ụzọ eke mmụọ iji pụọ na akwa akwa yana akwa a na-ewepu unyi na-egosipụta ya. Ejiri ihe eji nwayọ dị ka mmanụ oyibo na mmanụ lemon, ọ siri ike iwepu ihe ọ bụla site na mmanya na-acha ọbara ọbara gaa na ink. Ndị na-enyocha ya na-a swearụ iyi site n'ihe ndị ọ rụpụtara - otu onye dere, sị, "E chekwara ọtụtụ uwe ndị a na-eduga n'ihe mkpofu."
Ejikwa onye na-eme kọfị gị, onye na-anụ ọkụ, ma ọ bụ oriọna ebe ibi n ’ụwa n’ụwa niile na ngwa ngwa plọg ndị a na-agakọ na ngwa na ekwentị gị. Ọbụna nke ka mma, ịnwere ike iji ha ịhazi oge maka ngwa ndị ahụ, yabụ na ị gaghị echeta ịgbanyụ ọkụ mgbe ị na-apụ n'ụlọ. Na nke ka nma (ọzọ), ịnwere ike iji Alexa ma ọ bụ Homelọ Google iji gosipụta olu ọ bụla.
Mee onwe gị amara ma zụta obere ọkụ ọkụ ndị ọzọ na-adịgide adịgide na-adịte aka naịị. Na mgbakwunye, na ogologo ụkwụ iri, ịgaghị anọ n'akụkụ mgbidi n'oge ọzọ ịchọrọ ịkpọ mgbe ekwentị gị na-akwụ ụgwọ. Nke ọ bụla na-abịa na atọ.
N'ihe banyere ịnọgide na-a drinkụ mmiri ọ ,ụ ,ụ, karama mmiri a na-agbaze mmiri kachasị mma na ha. Ejiri okpukpu atọ kpuchie ya na ikuku, ọ na-eme ka ihe ọ coldụ coldụ oyi jụrụ oyi ruo ihe dị ka awa iri anọ na anọ, ọ drinksụ hotụ na-ekpo ọkụ na-ekpokwa ọkụ ruo ihe dị ka 18. Gụnyere, oyi akwa ọla kọpa na-egbochi oghere. Ọ dị na nha atọ na agba 16, dịka onyx, suede na-acha anụnụ anụnụ, na teakwood sere ebe a.
Enwere ụzọ kachasị mma ị drinkụ mmanya, ya na ihe metụtara ice ndị a na-eme nnukwu cubes na spheres. Ha na-agbaze obere ngwa ngwa karịa cubes-mebere, nke pụtara na ihe ọ drinksụ drinksụ gị ga-agbazere mana anaghị etinye mmiri. Emekwara ha site na silicone na-agbanwe agbanwe, nke na-eme ka ọ dị mfe ịpụpụta otu cubes otu oge.
Mee ka azụ gị nwee obi ụtọ - ọbụlagodi mgbe ị na-anọ ogologo oge na tebụl gị - na ohiri isi a. Ejiri ụfụfụ nchekwa dị nro ma na-akwado ya, ọ na-akwado itinye aka n’ọkpụkpụ azụ kwesịrị ekwesị iji gbochie ihe mgbu na ikechi olu, eriri abụọ ahụ na-agbanwe agbanwe n’oche gị iji mee ka ọ dịrị n’udo. Otu onye na-enyocha ihe dere, sị: “Zọpụtara m azụ.
Oge nzipu ozi: Jul-22-2020